Isbahaysiga nadiifinta ee 'Grid Alliance' wuxuu bixiyaa khibrad farsamo iyo injineernimo si loo xoojiyo gudbinta shabakadda tamarta nadiifka ah. Sawir ayaa la qaaday ka hor faafida. Astaanta Sawirka: Dennis Schwartz
Qeybta:Dayactir Saddex-bilood ah4 min akhris
Mareykanka gudihiisa, Midwest waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee wasaqda wasakheynta kaarboonka. Si loo yareeyo wasakheynta kaarboonka heer ahaan xawaaraha lagama maarmaanka ah, waa inaan si wadajir ah u hawlgalnaa. Sababtaas awgeed, Hay'adda McKnight Foundation waxay taageertaa ficil geesinimo leh oo ku aaddan dhibaatada cimilada, iyadoo la ogsoon yahay in dhaqaalaha oo dhan laga jaro in loo baahan yahay in wax laga beddelo nidaamkeenna tamarta. Waxay sidoo kale ku baaqeysaa in la ilaaliyo dimuqraadiyad caafimaad qabta iyo in caddaalad jinsi iyo dhaqaale loo helo bulshooyinkeenna.
"Waqtigan waa isbedel waqti muhim ah taariikhda aadanaha," ayuu yiri gudoomiyaha guddiga McKnight Noa Staryk. "Waan ku faraxsanahay deeq bixiyaasheena, kuwaas oo hogaaminaya shaqooyin awood leh si loo hormariyo himilooyinka hami sare leh ee cimilada."
McKnight's Midwest Cimilada & Tamarta (MC&E) barnaamijka waxay ka shaqeysaa sidii loo ilaalin lahaa loona horumarin lahaa tayada nolosha Midwest iyadoo loo marayo maalgashi joogto ah oo xagga cimilada iyo hoggaanka tamarta ah oo ka jira gobolkan. 4-rubucii deeq-lacageedka 2020, McKnight wuxuu siiyay 84 deeq oo wadarta $6.5 milyan ah. Lacagtaas, $2.9 milyan ayaa u tagey wada-hawlgalayaasha deeqaha bixiya ee ay taageerayaan barnaamijka MC&E.
“Tani waa xilli isbeddel lagu jiro waqti muhiim u ah taariikhda aadanaha. Waxaan ku faraxsanahay deeq bixiyaasheena, kuwaas oo hogaaminaya shaqooyin awood leh si loo hormariyo himilooyinka hami sare leh ee cimilada. ” —NOA STARYK, KURSIGA GOLAHA McKNIGHT
Wada-hawlgalayaasha hoos ku xusan waxay bulshada dhexdeeda ka hawlgalaan xallinta cimilada, iyagoo ka shaqeynaya sidii ay si aad ah u jari lahaayeen wasakheynta kaarboonka sannadka 2030. Liiska buuxa ee deeqaha la oggolaaday ayaa laga heli karaa keydka macluumaadka.
Nadiifinta Grid Alliance, oo la aasaasay 2001, waxay ka shaqeysaa sidii looga gudbi lahaa caqabadaha keenaya keenista tamarta la cusboonaysiin karo ee suuqa Midwest. Waxay heshay deeq $550,000 ah muddo 24 bilood ah si ay usii wadato meeleynta Midwest sidii yareynta kaarboonka iyo hoggaamiyaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Taageerada McKnight waxay hormarin doontaa isbahaysiga isbahaysiga ee shabakada gudbinta korantada si loo dardar geliyo qaadashada dabaysha, qoraxda, iyo keydinta tamarta. Dadaalkani wuxuu gacan ka geysanayaa adeegyada yutiilitida ee gobolka Minnesota iyo gobollada kaleba inay hawlgab ka dhigaan dhirta dhuxusha aan dhaqaalaha ku jirin, kana fogaadaan horumarka gaaska cusub, waxayna ku dari doontaa dabaysha, qorraxda, iyo kaydinta kheyraadkooda.
Cimilada Cimilada: Hantida Xayawaanka ee Will Steger helay $400,000 muddo 24 bilood ah. Jiilka Cimilada ayaa dhowaan ku milmay iMatter si loo ballaariyo taageeradeeda ficilka cimilada dhalinyarada iyadoo lagu darayo deegaanka, ololeyaasha maxaliga ah ee cadaalada iyo Madow, Asal ahaan, iyo latalinta dhalinyarada midabka leh. Waxay sidoo kale xoojin doontaa jiritaankeeda Isku-xirka Dhalinyarada U Dhaqdhaqaaqa Deegaanka. Iyada oo la taageerayo ururada isgoysyada ee awooda siiya dhalinyarada iyo jaaliyadaha jinsiyadaha kala duwan, fasalada, iyo sooyaalka magaalooyinka iyo miyiga, Jiilka Cimilada wuxuu keenaa hanaan nimo iyo istiraatiijiyad leh si loo gaaro himilooyinka hami ee hami.
Xarunta Arimaha Reer Miyiga waxay xooga saareysaa abaabulka aasaasiga ah - dhageysiga tabashooyinka iyo baahiyaha bulshada isla markaana diiradda saaraya wacyigalinta si waafaqsan. Sawir laga qaaday 2019, ka hor faafida. Sumcadda sawirka: Xarunta Arrimaha Reer Miyiga
The Xarunta Arrimaha Guryaha, oo la aasaasay 1973, wuxuu si qoto dheer ugu qotomaa bulshada reer miyiga ah wuxuuna keenaa gacan-ku-hayn, arrimo badan oo ku saabsan awood-siinta bulshada reer miyiga ah. Waxay heshay $300,000 in ka badan 24 bilood si loo dhiso awoodda abaabulidda bulshada ee muddada-dheer iyada oo loo marayo u-qareemidda arrimo badan iyo ka-qaybgalka miyiga Minnesota iyo Iowa.
Ugu dambeyntii, ka Golaha Deegaanka Iowa helay $200,000 muddo 24 bilood ah. Iowa waa hogaamiye tamar nadiif ah, oo leh taageero laba dhinac oo u gaar ah tamarta dabaysha. Goluhu wuxuu ka ciyaaraa door hoggaamineed iyo isuduwid ka dhexeeya u ololeeyaasha tamarta nadiifka ah ee Iowa, isagoo ka hawlgalaya goobo badan oo lagu raadinayo siyaasadda tamarta nadiifka ah.
Soo Dhaweynta Gudoomiye Cusub iyo Xubnaha Shaqaalaha
Waxaan sii wadeynaa dabaaldeggii ugu dambeeyay dhawaaqa in Tonya Allen uu noqon doono madaxweynaha xiga ee McKnight, laga bilaabo Maarso 1, 2021. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in xubin muddo dheer ka tirsan guddiga oo loo doortay Noa Staryk inuu noqdo gudoomiyaheena cusub ee guddiga. Waxay horay u soo noqotay gudoomiye nimo sanadihii 1999 ilaa 2004. Waxaan si kal iyo laab ah ugu mahadcelineynaa Debby Landesman, gudoomiye kuxigeenka ilaa iyo 2018, kaasoo ka degay gudiga sanadkan kadib sagaal sano oo u heelan adeeg, iyadoo la waafajinayo siyaasada McKnight ee ku saabsan xadidaada waqtiga.
Bidix ilaa midig: Sarah Christiansen, Jenna Dahlberg, Tony Lusiba, Amanda Williams
Horaantii bishaan waxaan soo dhaweynay dhowr xubnood oo cusub oo shaqaale ah. Sarah Christiansen wuxuu ku biiray McKnight oo ah agaasimaha barnaamijka MC&E. Iyadoo uu ku shaqeynayo wax ka badan 30 sano, Christiansen waa hogaamiye samafal xilliyeed u heellan sidii loo heli lahaa wadiiqooyin badan oo lagu gaarayo dhaqaale sinnaan iyo kaarboon dhexdhexaad ah. Markii hore, waxay u shaqeysay agaasime barnaamijka Solidago Foundation waxayna ahayd ergo maalgelisa Shirka Xisbiyada, oo ah hay'adda ugu sareysa ee go'aan gaarista ee Qaramada Midoobay Qaabdhismeedka Isbedelka Cimilada.
Tony Lusiba waa agaasimahayaga cusub ee teknolojiyada macluumaadka. Wuxuu ku takhasusay horumarinta amniga xogta, dhisida qalab loo habeeyay, iyo hagaajinta isku xirnaanta. Amanda Williams wuxuu ku biiray McKnight oo ah agaasimaha shaqaalaha. Williams waxay keentaa khibrad ballaaran oo ku saabsan maaraynta isbeddelka, helitaanka kartida, iyo tababarka hoggaaminta waana maamule aqoon u leh Soo-saarista Hormarinta Dhaqamada. Jenna Dahlberg waa maareeyahayaga maaliyadeed ee cusub. Xisaabiye guud oo shahaado haysta, iyadu waxay xirfad u leedahay xisaabinta maaliyadeed, u hoggaansamida, iyo warbixinta.